प्राचीन लागि एक वरिष्ठ केन्द्र र अन्य जानकारी कसरी पाउन |USAHello | USAHello
प्राचीन लागि एक वरिष्ठ केन्द्र र अन्य जानकारी कसरी पाउन
तपाईं एक वरिष्ठ आप्रवासी वा शरणार्थी छन्? तपाईं आफ्नो परिवार मा प्राचीन छन्? वरिष्ठ लागि संसाधनहरू बारेमा जान्न. एक वरिष्ठ केन्द्र आफ्नो समुदाय को पुरानो सदस्य भेट्न अन्य तरिकामा फेला पार्न र सिक्न.
अमेरिकामा, धेरै समुदाय ठूलो हो, र सबैलाई आफ्ना छिमेकीहरूलाई थाह. पुरानो मान्छे अन्य वरिष्ठ नागरिकहरु भेट्न लागि गाह्रो हुन सक्छ. तर हरेक समुदाय एक वरिष्ठ केन्द्र भनिने सामाजिक स्थान छ.
शरणार्थी प्राचीनहरूले अनुभव कुरा हेर्न
भिडियो मा मान्छे जस्तै, तपाईं शायद बलियो बनाएको छ कि धेरै कुराहरू बच. तर यो एक ठूलो देशमा नयाँ जीवन सुरु एक्लो हुन सक्छ. USAHello मा, हामी तपाईंलाई यहाँ खुशी छन्. हामी तपाईंलाई आफ्नो बाटो फेला पार्न र मान्छे जडान मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ.
कसरी आफ्नो छिमेकी मानिसहरू भेट्न
आफ्नो स्थानीय पुस्तकालय प्रयोग
अमेरिकी पुस्तकालयहरु भन्दा बढी बस पुस्तकहरू लागि हो. तिनीहरूले जानकारी र शिक्षाको लागि केन्द्र हो. तपाईं एक कम्प्युटर कक्षा सामेल गर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय घटनाहरूको बारेमा पत्ता, र बारेमा जब सल्लाह प्राप्त. केही अंग्रेजी कक्षाहरू छ. मान्छे पढ्न र लेख्न सिक्न लागि धेरै पुस्तकालयहरु कक्षाहरू छ. तिनीहरूले भने, तपाईंको पुस्तकालय तपाईं कक्षाहरू पाउन मदत गर्न सक्छ. आफ्नो निकटतम पुस्तकालय फेला.
वरिष्ठ केन्द्र मा, तिनीहरूले लंच छ, खेल, कक्षाहरू, र बस प्राचीन अन्य गतिविधिहरु. केही वरिष्ठ केन्द्र newcomers लागि पनि हो. वरिष्ठ केन्द्र ज्यादातर मुक्त छन्. तपाईं पुरा दिन को लागि जान सक्नुहुन्छ. तपाईं भोजन वा सैर लागि एउटा सानो रकम तिर्न सक्छ. तर सबै भन्दा गतिविधिहरु र वर्गहरू मुक्त छन्. आफ्नो स्थानीय पुस्तकालय तपाईं आफ्नो समुदायमा वरिष्ठ केन्द्र फेला पार्न भन्नेछु जहाँ.
तपाईं देश क्षेत्रबाट आउँछ भने, तपाईं शायद खेती वा बागवानी हराइरहेका छन्. तर पनि ठूलो शहर मा, तपाईं एक समुदाय बगैचा पाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँ तपाईं आफ्नो तरकारी बढ्न सक्छ, आफ्नो समुदाय मदत, र अन्य किसानहरु र माली पूरा. एक समुदाय बगैचा फेला.
नयाँ कुरा कसरी सिक्न
तपाईं मान्छे आफ्नो भाषा बोल्न जहाँ एक समुदाय बस्नुहुन्छ भने यो एक्लो हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो अंग्रेजी सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा चुनौती हो, तर पनि यो रमाइलो हुन सक्छ. र अंग्रेजी कक्षाहरू आफ्नो परिस्थितिमा अन्य पूरा गर्न एक राम्रो तरिका हो. तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ FindHello तपाईं नजिकै अंग्रेजी कक्षाहरू पाउन. आफ्नो शहर र राज्य प्रविष्टि. त्यसपछि शिक्षा र अंग्रेजी कक्षाहरू चयन.
तपाईं एक वर्ग को विचार मन छैन भने वा वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो ठिक छ. सट्टा, तिमी सक्छौ अनलाइन अंग्रेजी कुराकानी सिक्न.
पनि यदि तपाईं एक नागरिक हुन प्रयास छैन, तिमी सक्छौ हाम्रो निःशुल्क नागरिकता वर्ग लिन. यसलाई आफ्नो अंग्रेजी मदत र संयुक्त राज्य अमेरिका बारेमा सिकाउन हुनेछ.
वरिष्ठ वा बच्चाहरु संग स्वयंसेवक
तपाईं अन्य newcomers मदत गर्न सक्छ. अर्को वरिष्ठ मदत गर्न सक्छ आफ्नो समय र कम्पनी को उपहार दिने जो एक्लो छ. एक वरिष्ठ साथी भइन् प्राचीन पढ्न. तपाईं एक स्थानीय resettlement एजेन्सी छन् भने, तिनीहरूले थाहा छ भने सोध्न आफ्नो मद्दत गर्नुपर्ने हुन सक्छ जो कसैले.
तपाईं एक स्थानीय विद्यालयमा नातिनातिनी हुन सक्छ. शायद तिमी कक्षाकोठामा स्वयंसेवक गर्न सक्नुहुन्छ, भोजन कक्ष, वा खेल मैदान. त्यहाँ नव आगन्तुक छोराछोरीलाई आफ्नै भाषामा मदत चाहिन्छ गर्ने हुन सक्छ.
आफ्नो स्वास्थ्य हेरचाह
वरिष्ठ आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ. त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा वरिष्ठ लागि धेरै स्वास्थ्य स्रोतहरू छन्.
स्वास्थ्य बीमा प्राप्त
वरिष्ठ लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा भनिन्छ. सबैभन्दा वरिष्ठ (उमेर 65 वा पुरानो) चिकित्सा छ. तर पहिला, तपाईं भन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिका मा बाँच्न पर्छ5वर्ष. तपाईं चिकित्सा प्राप्त गर्न प्रतीक्षा बेला, तपाईं आफ्नो राज्य मा स्वास्थ्य विनिमय मार्फत एक बीमा कम्पनी बाट स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्छन्. वरिष्ठ आप्रवासी लागि स्वास्थ्य बीमा थप पढ्नुहोस्.
तपाईं कागजातनगरिएकोत्रुटि भने (कुनै कानुनी कागजात छ) तपाईंलाई स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्दैन. तर जो कागजातनगरिएकोत्रुटि आप्रवासी मदत संयुक्त राज्य अमेरिका मा क्लीनिक छन्. हेर्नु FindHello तपाईं नजिकै समुदाय स्वास्थ्य पाउन. आफ्नो शहर र राज्य प्रविष्टि. त्यसपछि स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य चयन.
जब तपाईं एक डाक्टर संग एक नियुक्ति बनाउन, तपाईं एउटा दोभासे लागि अनुरोध गर्न सक्छ. डाक्टर जान कसरी पत्ता.
तपाईं स्वस्थ रहन र मान्छे भेट्न गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो कुरा को एक एक व्यायाम वर्ग सामेल छ! तपाईंको वरिष्ठ केन्द्र मा सोध्न, सामुदायिक केन्द्र, वा आफ्नो उमेर समूहको लागि व्यायाम वर्गहरू बारे पुस्तकालय.
वरिष्ठ लागि सार्वजनिक लाभ
शरणार्थी वा अन्य अमेरिकी निवासी रूपमा, तपाईं सार्वजनिक लाभ को लागि योग्य गर्न सक्नुहुन्छ. यी असक्षम छन् जो मान्छे को लागि लाभ समावेश, बेरोजगार वा एक निश्चित उमेर भन्दा. सार्वजनिक लाभ बारेमा थप जान्न.
पूरक सुरक्षा आय (SSI) मद्दत असक्षम वयस्क छ, बच्चाहरु, र अधिक मान्छे 65 जो कम आय. केही गैर-नागरिक SSI प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. गैर-नागरिक लागि SSI बारेमा जान्न.
SSI बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी: केही शरणार्थी र जो SSI प्राप्त अन्य गैर-नागरिक पछि यो प्राप्त गर्न रोक्नु हुनेछ7वर्ष. तर तपाईं एक नागरिक बन्न यदि, के तपाईं यो आवश्यकता रूपमा लामो समय को लागि SSI प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. एक अमेरिकी नागरिक कसरी बन्न सिक्न.
कानुनी र आपतकालीन सहायता
पुरानो धेरै मानिसहरू दुरुपयोग ग्रस्त (चोट भइरहेको) र ठगी (धोखा भइरहेको). तपाईं आफ्नो डाक्टर बताउन सक्नुहुन्छ, प्रहरी, वा आफ्नो वरिष्ठ केन्द्र मा कसैले तपाईंलाई घरमा दुर्व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने भइरहेको वा यदि तपाईंलाई लाग्छ कि कसैले तपाईंलाई धोखा छ. कसैले तपाईंलाई चोट गर्न अनुमति दिएको छ, तिनीहरूले आफ्नो आफ्नै परिवार छन् भने पनि. मद्दत वा रिपोर्ट दुरुपयोग प्राप्त गर्न, को NAPSA वेबसाइटमा जानुहोस् र आफ्नो राज्य चयन. तपाईं आफ्नो राज्य चयन पछि, तपाईं नक्सामा अर्को कल गर्न फोन नम्बर पाउनुहुनेछ.
तपाईं एक वकील आवश्यक छ भने, तपाईं कानुनी सहायता पाउन सक्नुहुन्छ. आफ्नो शहर र राज्य प्रविष्टि. त्यसपछि अधिकार र कानून क्लिक. सूचीबद्ध आफ्नै भाषामा तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ सेवाहरूको धेरै. तपाईँले खोजी गर्न सक्छन् वकील लागि FindHello. आफ्नो शहर र राज्य प्रविष्टि. त्यसपछि नागरिकता र अध्यागमन चयन.
तपाईं थप जानकारी आवश्यक?
के तपाईं यस पृष्ठमा खोजिरहेको के पाउँछौं भने, कृपया दिन छैन अप! सट्टा, तपाईंको वरिष्ठ केन्द्र मा सोध्न, resettlement एजेन्सी, या लाइब्रेरी. आफ्नो काम के तपाईं के आवश्यक छ फेला पार्न मद्दत छ. तपाईं इन्टरनेट तपाईंलाई मदत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै.
यहाँ तपाईंलाई मदत गर्नेछ केही अंग्रेजी शब्द इन्टरनेटमा हेर्न:
एक वरिष्ठ केन्द्र फेला … (आफ्नो शहर को नाम थप्न)
मा वरिष्ठ लागि स्रोतहरू फेला … (आफ्नो शहर को नाम थप्न)
अनुवाद मद्दत प्राप्त
तपाईं समस्या अंग्रेजी मा सोधेर छ भने, अनुवाद उपकरण प्रयोग. तपाईं मा शब्द टाइप गर्न सक्नुहुन्छ गुगल अनुवाद् र यो तपाईं अंग्रेजी मा भन्न के भन्नेछु. वा, तिमी सक्छौ निःशुल्क अनुवाद मद्दत र व्याख्याकारों फेला.
पुरानो वयस्क र आफ्नो हेरविचारकर्ताओं मदत गर्न संसाधन
प्राचीन दुरुपयोग र ठगी बारेमा थप जानकारी